ဘာလီခရီးစဥ် - Asian Tour Myanmar
ဘာလီဆိုတာ နဲ့ ပိုလာဘာလီ သီချင်းလေးကို ပြေးမြင်ကြတယ်ဟုတ် ဘာတဲ့ “ အင်းဒိုနီးရှား ပိုလာဘာလီ ကျွန်းလေးဝယ် ………. သူနဲ့လည်း တွေ့လို့ချစ်ကြိုးသွယ်” ဆိုသော စာသားလေးအတိုင်း ချစ်သူလေးတွေရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကျွန်းလေးလည်းဖြစ် ပါတယ်နော် ။
ချစ်သူ စုံတွဲတွေ အတွက်ပဲ ပျော်စရာရှိတာလားလို့ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော် မိသားစု နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ တစ်ယောက်ထဲ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သွားရောက်လည်ပတ်သူတိုင်းကို သူမတူတဲ့ ရသ တွေ တမူထူးခြားတဲ့ အမှတ်တရတွေကို ခံစားရမှာပါနော်…
ဈေးလည်းမများတဲ့အပြင် သွားလည်မယ့်နေရာတွေကလည်းစုံ ၊ အစားအသောက်ကလည်း ကောင်းတာထက် သာလွန်နေပြီး Hotel တွေကလည်း4Star ဆိုပေမယ့် Local5star အဆင့်ရှိပြီး Night Market နဲ့လည်း နီးတဲ့နေရာ လေးမှာဆိုတော့ လက်ဆောင်တွေ စိတ်ကြိုက်ဝယ်လို့ရတဲ့အပြင် ဈေးနှုန်းကလည်း လေယာဉ်လက်မှတ် ၊ Hand Carry7kg နှင့် Luggage 20 Kg ၊ Hotel တည်းခို ခ ၊ နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညစာ တွေ လည်းပါတယ် ၊ ဝင်ကြေး ခတွေရော လှေစီးခ တွေရော အကုန်အပြီး အစီး စရိတ်ငြိမ်းဆိုတဲ့ အတွက် တန်နေပါပြီနော် … ကဲ ချစ်ရသူလေးနဲ့ အတူ လည်ပတ်ဖို့ ရန် အတွက် ဈေးလည်းတန် ပျော်ဖို့လည်းကောင်း တဲ့ ခရိးစဉ်လေးမှာ လိုက်ပါဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်...
ပြည်တွင်းသာမက ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများကပါ အသိအမှတ်ပြုဆုများချီးမြှင့်ခံရသော ၁၂နှစ်ကျော်ကြာရပ်တည်နေတဲ့ "Asian Tour" မှ လူကြီးမင်းတို့၏ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုအတွက်တာဝန်ယူပါရစေခင်ဗျ
ရန်ကုန် - ဘာလီ - ရန်ကုန်
ချစ်သူ စုံတွဲတွေ အတွက်ပဲ ပျော်စရာရှိတာလားလို့ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော် မိသားစု နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ တစ်ယောက်ထဲ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သွားရောက်လည်ပတ်သူတိုင်းကို သူမတူတဲ့ ရသ တွေ တမူထူးခြားတဲ့ အမှတ်တရတွေကို ခံစားရမှာပါနော်…
ဈေးလည်းမများတဲ့အပြင် သွားလည်မယ့်နေရာတွေကလည်းစုံ ၊ အစားအသောက်ကလည်း ကောင်းတာထက် သာလွန်နေပြီး Hotel တွေကလည်း4Star ဆိုပေမယ့် Local5star အဆင့်ရှိပြီး Night Market နဲ့လည်း နီးတဲ့နေရာ လေးမှာဆိုတော့ လက်ဆောင်တွေ စိတ်ကြိုက်ဝယ်လို့ရတဲ့အပြင် ဈေးနှုန်းကလည်း လေယာဉ်လက်မှတ် ၊ Hand Carry7kg နှင့် Luggage 20 Kg ၊ Hotel တည်းခို ခ ၊ နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညစာ တွေ လည်းပါတယ် ၊ ဝင်ကြေး ခတွေရော လှေစီးခ တွေရော အကုန်အပြီး အစီး စရိတ်ငြိမ်းဆိုတဲ့ အတွက် တန်နေပါပြီနော် … ကဲ ချစ်ရသူလေးနဲ့ အတူ လည်ပတ်ဖို့ ရန် အတွက် ဈေးလည်းတန် ပျော်ဖို့လည်းကောင်း တဲ့ ခရိးစဉ်လေးမှာ လိုက်ပါဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်��
ရန်ကုန် - ဘာလီ ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်းလေးကတော့ တစ်ယောက်ကို -
22.02.2020 to 26.02.2020 (650 USD)
25.03.2020 to 29.03.2020 (650 USD)
Visa လားမလိုပါဘူး Passport ရှိရုံနဲ့သွားလို့ရနေပါပြီနော်
ရန်ကုန် - ဘာလီ အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ် ( 7Kg Hand Carry + 20Kg Baggage )
Phone No. 01-500 062, 09-443 164 851, 09-429 570 967
Head Office: R4/202, Shwe Than Lwin Compound, Pan Hlaing St., Sanchaung Tsp, Yangon, Myanmar.
22.07.2020 to 26.08.2020 (650 USD)
ပင်လယ်ရေ မျက်နှာ ပြင် အထက် ပေ ၂၀၀ ကျော် တွင် တည်ထားကိုးကွယ်ထားသော အမည်ကျော် Uluwatu Temple
ကျောက်ဆောင်များကြားမှ ရေလှိုင်းများ တဖွားဖွား ဖြင့် အသည်းယားစွာ လှပလွန်းတဲ့ Waterblow တွင်အမှတ်တရဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကြမယ်
Mengwi ရွာတွင်ရှိသော ငါးရေကန်ပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းရံ ထားသော Taman Ayun Temple များကြားတွင် အမှတ်တရဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကြမယ်
ဘာလီတွင် အလည်ပတ်သင့်ဆုံးနေရာဖြစ်သည့် အလွန်လှပသော ပင်လယ်အဆွယ်ရှိ ကျောက်ဆောင်ပေါ်တွင် ရှုမညီးအောင်လှပနေသည့် Tanah Lot Temple သို့သွားရောက် လည်ပတ်မယ်
Kintamani က မီးတောင်ဟောင်းရှိရာသို့ သွားရောက် လေ့လာမယ်
Bali Handara Heaven’s gate တွင် မိမိစိတ်ကြိုက် ပုံရိပ်များ ဖမ်းတီးမယ်